Hitan'izy ireo fa marefo ny Safari ao anatin'ny hetsika hacker Pwn2Own | Avy amin'ny mac aho
Tsy vao sambany no nisy bibikely hita tamin'ity fihaonambe ity, mitrandraka na tsy fahombiazana amin'ny rafitra fiasan'ny Mac, browser browser, iOS ary ny sisa amin'ny OS misy ankehitriny. Amin'ity tranga ity dia fahitana azo atao izany midira amin'ny Touch Bar amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny browser browser.
Toa tsy vao sambany no nisy izany ary tamin'ity taona 2016 ity dia efa nahita tsy fahombiazana sahala amin'ny Touch Bar an'ity MacBook Pro ity isika. Na izany na tsy izany dia tsy olana lehibe io satria vitany daholo atao dia eSoraty lavitra eo amin'ny Mac Touch Bar ary fehezo ny hitsin-dàlana.
Etsy ankilany, tsy maintsy hazava tsara fa tsy nifantoka tamin'ny macOS sy ny tsy fahombiazany fotsiny izy ireo. Ny fandikan-dalàna dia hita ihany koa ao amin'ireo rafitra fiasa sisa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, toa ny Adobe, Microsoft, Linux ary Ubuntu.
Hamafiso! @ 5aelo nampiasa bibikely fanatsarana JIT ao anaty tranokala, bug lozika macOS, & ampidirina kernel hanatanterahana kaody hitrandrahana tsara ny Apple Safari. Ity rojo ity dia nahazoany $ 65K & isa 6 Master of Pwn isa. pic.twitter.com/iLfNFnXzzs
- Zero Day Initiative (@thezdi) Diaben'ny 15 tamin'ny 2018
Amin'ity hetsika ity dia karohina ny karazana tsy fahombiazana rehetra hidirana amin'ny rafitra ary zarao amin'ireo "ireo voakasik'izany" mba hahafahan'izy ireo mamaha ny olana haingana araka izay tratra. Amin'ireo fanontana ireo dia matetika no manome ireo mahita ireo fahalemena ireo ho fanampin'ny fahazoana ny fanekena ny fiarahamonina mpijirika ary ny orinasa voakasik'izany izay miandraikitra ny famahana ny tsy fahombiazana. Amin'ity tranga ity dia mety hanomboka i Apple ny kinova manaraka an'ny macOS High Sierra misy ny olana voavaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook Pro » Hitan'izy ireo fa marefo ny Safari ao anatin'ny hetsika hacker Pwn2Own
Apple patanty ho an'ny keyboard tsy misy fanalahidy ara-batana miaraka amin'ny tamberina haptic